बाल्यकालमा सबैले केही न केही सपना पालेकै हुन्छन् । मेरो सपना चाहीँ आर्मी बनेर देशको सेवा गर्ने थियो । भलिबल खेलाडी बन्ने कुरा त मेरो कल्पनामै थिएन ।
गणतान्त्रिक भलिबल प्रतियोगिता सकाएर म टिमसँगै धनगढी फर्किएँ । त्यसपछि पनि बलराम सरले बाबा-ममीलाई फोन गरिरहनुहुन्थ्यो ।
अब म पोखरा जाने पक्का जस्तै भयो । कक्षा ७ देखि पोखरामा पढ्ने र भलिबल पनि खेल्ने कुरा वरपर साथीहरुले पनि थाहा पाइसकेका थिए । उनीहरु पनि खुसी भएका थिए । छिमेकीहरुले पनि यस्तो अवसर बारम्बार आउँदैन, छोरीको भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर बाबा ममिसँग कुरा गरेका थिए । सबैको कुरा सुनेर राम्ररी नै बुझेपछि म बाबासँगै पोखरा गएँ ।
पोखरामा फिस्टेल एकेडेमीको होस्टेलमा पुगेपछि बाबासँग छुट्टनि निकै नै गाह्रो भएको थियो । सरहरुले चिन्ता नगर्नु, हामी राम्ररी नै हेर्छौं, हामी पनि अभिभावक नै हौं भनेर बाबालाई सम्झाउनुभएको थियो ।
सरहरुले ढुक्क भएर घर जानुस् भनेपछि बाबा ठूलो भरोसा गरेर फर्कनु भयो । मलाई भने बाबासँगै घर र्फकन मन लागिरहेको थियो । त्यहाँ नबसौं जस्तो भइरहेको थियो । बाबा फर्कंदा टाढा पुग्दासम्म उहाँलाई हेरिरहें ।
पोखरा जानुअघि छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने र भलिबल खेल्नेबाहेक अर्को कुरा पनि मेरो दिमागमा थियो, पोखराको सुन्दरता ।
धनगढी प्रगति टोलमा नदेखेका, नबुझेका धेरै कुरा मैले पोखरा गएपछि बुझें । घरबाट टाढा हुँदाको दुःखले पनि सताइरहेकै थियो । होस्टेलमा बसेर मैले धेरै कुरा सिकें । सर-मिस सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो । घरको याद आइरहने भए पनि विस्तारै सहज हुँदै गएकी थिएँ ।
घरमा फोन गर्दा भने आँसु नझरेको दिन नै हुँदैनथ्यो । मम्मी पनि फोनमै रुनुहुन्थ्यो । घरमा फोन गर्ने भनेपछि होस्टेलमा सरहरुले फोन गरिदिनुहुन्थ्यो । फोन गरेपछि मनमा केहीबेर आनन्द हुन्थ्यो ।
फोनमा मम्मीले सोध्ने कुरा सधैँ उस्तै हुन्थे …
छोरी तिमीलाई कस्तो छ ?
ट्रेनिङ कस्तो हुँदैछ ?
राम्ररी पढ्दै छौ ?
त्यहाँ साथीहरु कस्ता छन् ?
तिमीलाई कसैले नराम्रो त भन्दैनन् नि ?
म दुःख लुकाएर भनिदिन्थेँ … अँ ममि यहाँ सबै राम्रो छ ।
घरबाट टाढा भएकाले नरमाइलो त कति लाग्थ्यो भनेर पनि सकिँदैन ।
साथीहरु बन्दै गएपछि नरमाइलो कम हुँदै गयो । साथीहरुले मलाई उनीहरुको घर लैजान्थे । उनीहरुको आमाबाबालाई भेट्दा मलाई खुसी लाग्थ्यो । बिस्तारै रमाउँदै थिएँ ।
खेल पनि राम्रो हुँदै गएको थियो । खेल्ने बेला सञ्जु, अञ्जु, सिपोरा दिदी, देवी दिदी, रञ्जना दिदीलगायत अरु दिदी र साथीहरुसँग निकै रमाइलो हुन्थ्यो । होस्टेलमा रिनासँगै अरु साथीसँग पनि राम्ररी मिलेर बसिरहेकी थिएँ ।
बिहान ५ बजेतिर उठ्यो, अनि केही खाएर पढ्न थाल्यो । ९ बजे खाना खाएर स्कूल गयो । स्कूल छुटेपछि बेलुका भलिबल अभ्यास हुन्थ्यो । प्रतियोगिता हुने बेलामा बिहान र बेलुका दुवै समय अभ्यास हुन्थ्यो ।
होस्टेलको अनुशासनमा आफूलाई मिलाउन सहज थिएन । पढाइ र खेलमा उत्तिकै मेहनत गर्नुपथ्र्यो ।
कहिलेकाहीँ त सबै छाडेर घर जाउँ जस्तो लाग्थ्यो । घरमा फोन गरेको बेलामा त अहिले नै गइहालौं हुन्थ्यो । कि त मम्मी-बाबा पोखरा आइदिनु भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । परिवारमा मम्मी-बाबा, दाइ भाउजु, दाइको छोरा, भाइ र म छौं । म पोखरा जाने बेलादेखि नै दाइले पनि हौसला दिइरहनु हुन्थ्यो ।
म छुट्टीको समयमा घर फर्कन्थें । छुट्टी सकिएर पोखरा फर्किने बेला भने असाध्यै सकस हुन्थ्यो । दसैँको छुट्टीमा घर जाँदा विभिन्न बहाना बनाएर बिदा पाएको भन्दा एक/दुई दिन बढी बसेर फर्कन्थें ।
बिरामी परें भनेर स्कूलमा फोन गर्थें । सरहरुले पनि राम्ररी निको भएपछि आउ भन्नुहुन्थ्यो । कहिले काहीँ झुट बोलेको कुराले कति धेरै खुसी दिन्छ हैं । दुई दिन बढी घर बसेपछि फर्कन त पर्थ्यो नै, तरपनि दुई दिन बढी भए पनि ममिसँग बस्न पाउने लोभ लाग्थ्यो ।
म घर जाँदा सानो बेलाका साथीहरु सबै भेट्न आउँथे । उनीहरुको लागि चकलेटहरु किनेर लगिदिन्थें । रमाइलो हुन्थ्यो । उनीहरुसँग घुम्न जान्थें । पोखराको बारेमा उनीहरु सोध्थे । म बताउँथेँ । होस्टल र्फकने दिन आएपछि फेरि घरमा रुवाबासी सुरु हुन्थ्यो ।
मम्मी-बाबा रोएको देखेपछि मेरो पनि आँशु खसिहाल्थ्यो । एक-दुई वर्षपछि भने म अलि बुझ्ने भएँ । मनमा नरमाइलो लागे पनि ‘आहा अब त पोखरा जाने दिन पनि आयो’ भनेर रमाइलो मानेको जस्तो देखाउँथें । मम्मी-बाबाको अगाडि खुशी देखिन प्रयास गर्थें ।
प्रतियोगिताहरु धेरै हुन थालेपछि भने घर जान पाउँदैन थिएँ । घर जाने समय दसैँ मात्रै हुन्थ्यो ।
११ कक्षासम्म फिस्टेलमा नै पढें । त्यतिबेलासम्म सबै कुरामा राम्ररी नै अभ्यस्त भएकी थिएँ । घरबाट र्फकंदा रुन मन लाग्ने बानी पनि हटेको थियो । मम्मी-बाबालाई निराश पार्ने कुनै काम गरेकी छैन भन्ने कुराले सन्तोष लाग्थ्यो । फिस्टेलमा पढ्दा सरहरुले गरेको व्यवहारले पनि मलाई अनुशासित भएर अघि बढ्न सहयोग पुग्यो ।
१२ कक्षा काठमाडौं आएर एलआरआईमा पढें । त्यसपछि शंकरदेव क्याम्पसमा बीबीएस पढें । खेलमा व्यस्त हुनुपर्दा क्याम्पस जाने समय नै हुँदैन थियो । पहिलो वर्ष क्याम्पस गएर नै परीक्षा पास गरें । त्यसपछि दोस्रो वर्षदेखि त नियमित क्याम्पस जानै सकिनँ । प्रतियोगितामा जाँदा पढाइ सोच्न नसकिने भए पनि मैले खेलसँगै पढाइ लैजान सक्दो प्रयास गरिरहेकी छु ।
मेरो खेलले नयाँ उचाइ पाएको चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबबाट खेल्न थालेपछि हो । २०७० देखि अलिहेसम्म एपीएफको भलिबल टिममा छु ।
एपीएफमा आएपछि पूरा समय नै खेलमा केन्द्रित भएँ । अभ्यास नियमित भयो । त्यसपछिका प्रतियोगिताहरु अझै राम्रो भइरहेको छ ।
त्यसैले ०७० सालकै अन्त्यमा पल्सर स्पोट्र्स अवार्डमा लोकपि्रय खेलाडीको पुरस्कार जितेँ । एसएमएस भोटिङमार्फत छनोट भएको त्यो बेला क्रिकेटका कप्तान पारस खड्का, फुटबलका विमल घर्तीमगर, एथ्लेटिक्सका यामसाजन सुनार र पौडीकी सोफिया शाहलाई मैले उछिनेकी थिएँ ।
मलाई अवार्ड जित्छु भन्ने लागेकै थिएनँ । ‘एसएमएस भोटमा मेरोभन्दा अरुकै धेरै आउँछ होला’ जस्तो लागेको थियो । अन्य दर्शकसँगै एपीएफको भोटले मैले जितें जस्तो लाग्छ ।
अवार्ड पाउँदा असाध्यै गर्व महसुस भयो । आनन्द आयो । आफूले गरेको मेहनतको फल पाएँ भन्ने लागेको थियो । सबै साथीहरु पनि निकै खुशी भए । सुदूरपश्चिम, फिस्टेल, पश्चिमाञ्चल र एपीएफ जहाँबाट खेले पनि बुझेर खेल्न थालेदेखि मलाई भलिबलले सन्तुष्टी नै दिएको छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा ढोरपाटन महिला भलिबल, आईजीपी कप, प्रधान सेनापति कपलगायत देशभर हुने अरु थुप्रै प्रतियोगिताहरुमा एपीएफ टिमबाट हामीले धेरै उपाधि जितिसकेका छौँ । हरेक दिन थप मेहनत गर्दै अगाडिका लागि तयारी गर्न अहिले रमाइलो लाग्छ ।
पहिले भलिबल खेल्दिनँ भनेर भागेकी मलाई अहिले भलिबले नै सबैथोक दिएको छ । भलिबल नै मेरो संसार भएको छ । गणतान्त्रिक भलिबल प्रतियोगितामा सुरु भएको मेरो भलिबल यात्रा राष्ट्रिय टिमसम्म आइपुग्दा धेरै फेरिएको पनि छ ।
पहिले पोखरा फिस्टेलमा हुँदासम्म म क्वीक स्पाइकरको रुपमा थिएँ । क्वीक स्पाइकसँगै मेरो काम विशेष त ब्लक गर्ने नै हुन्थ्यो । पछि ओपन स्पाइकर हुँदा मेरो भूमिका बढ्दै गयो । ओपन स्पाइकर हुँदा सुरुमा त खेल्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने पनि थियो ।
बिग्रेको बल हान्ने जिम्मेवारी पनि ओपन स्पाइकरको हुँदा चुनौती धेरै नै हुन्छ । पछि खेल्दै जाँदा राम्रो हुँदै गयो । कोचहरुले पनि ओपन स्पाइकमा राम्रो हुँदै छ भन्नुभएपछि त्यसमै लागें ।
सन् २०१४ मा भएको प्रथम दक्षिण एसियाली आमन्त्रण भलिबल प्रतियोगितामा म पहिलोपटक राष्ट्रिय टिममा परेकी थिएँ । त्यतिबेला म क्वीक स्पाइकर नै थिएँ । २०१६ को साफमा दोस्रोपटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दा म ओपन स्पाइकर थिएँ । दुवै पटक निभाएको भूमिका आफैले सम्झँदा राम्रै गरें भन्ने लाग्छ । राष्ट्रिय टिमबाट खेलेको तेस्रो प्रतियोगिता २०१७ को सेन्ट्रल जोन भलिबल हो ।
राष्ट्रिय टिमबाट खेल्दाको जस्तो खुसी त अरु के कुरामा होला र ? खेल जुनसुकै होस्, खेलाडीका लागि राष्ट्रिय टिमबाट खेल्नु ठूलो गर्वको कुरा हुन्छ ।
म पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा परेको कुरा साथीहरुले पत्रिकामा पढेर मलाई सुनाए । मैले मम्मीलाई फोन गरेर सुनाएँ । मम्मी असाध्यै खुसी हुनुभयो । घरमा मम्मी-बाबाले त छिमेकी आफन्तलाई बोलाएर पार्टी नै दिनुभयो ।
त्यो बेला म एपीएफमा नै थिएँ । राष्ट्रिय टिमको छनोटमा मैले राम्रै गरेको थिएँ । तर पनि धेरै सिनियर दिदीहरु भएको हुँदा म छनोट हुन्छु जस्तो लागेको थिएन । घरमा मम्मी-बाबा खुसी भएको देखेर मेरो खुसी दोब्बर भएको थियो ।
एपीएफमा जस्तै राष्ट्रिय टिममा पनि हाम्रो मेलमिलाप राम्रो छ । त्यसैले मलाई टिममा भिज्न अप्ठ्यारो भएन ।
मेरो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता प्रथम दक्षिण एसियाली आमन्त्रण भलिबलमा हामी दोस्रो भएका थियौँ । श्रीलंकालाई हराएर फाइनलमा पुगेका हामी भारतसँग हारेका थियौँ ।
त्यसको दुई वर्षपछि साफ भलिबलमा हामी तेस्रो भयौँ । सेन्ट्रल जोन भलिबलमा हामी दोस्रो भयौँ । समग्रमा सन्तोषजनक नै रहे पनि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु खेल्नै पाएका छैनौँ । खेल्नै नपाइ अझ राम्रो गर्दै जाने भनेर सोच्नु निकै कठिन हो ।
सुदूरपश्चिम, फिस्टेल, पश्चिमाञ्चल र एपीएफसम्म आइपुग्दा मेरो खेल धेरै निखारिएको छ । यसका लागि मेरो परिवार, आफन्त, साथीभाइको उत्तिकै हात छ । सबैको योगदानले नै मेरो खेल राम्रो बनेको हो ।
सबैभन्दा सपोर्ट त मलाई घरबाट नै मिल्छ । मेरो हरेक खेलबारे बाबा-मम्मीले जानकारी राख्नुहुन्छ । भलिबलको हरेक समाचारमा उहाँहरुको ध्यान जान्छ । मेरो नाम आएको पत्रिकाको हरेक कटिङ मम्मीले अहिलेसम्म सुरक्षित राखिरहनु भएको छ ।
आज मैले खेल जिते भनें भोलि बिहान बाबाको फोन आउँछ । छोरी तिमीले जितिछौ हैं भन्नुहुन्छ । त्यस्तो मायाले मलाई खुसीसँगै हौसला मिल्छ । भलिबल खेलेर चार-वटा स्कुटर र एउटा बाइक उपहार पाएकी छु । ८० भन्दा धेरै पदक जितेकी छु । पहिलोपटक पाएको स्कुटर बाबाको लागि घर पठाएँ । त्यो फिस्टेलमा हुँदा नै हो । दोस्रो पटक एपीएफमा हुँदा पाएको स्कुटर पनि घर नै पठाएँ । त्यो दाइले चलाउनुहुन्छ । तेस्रो पटक पाएको स्कुटर मैले आफैले चलाएँ । बाँकी बेचें ।
भलिबलकै लागि वैदेशिक प्रशिक्षण लिन जापान जाने अवसर पनि पाएँ । एपीएफबाट जापानको प्रशिक्षणमा जाने मौका मिलेको थियो ।
जापानमा युनिभर्सिटी अफ टिसुकुबामा एक महिना प्रशिक्षण लिएपछि मेरो खेल अझै सुधि्रयो । विशेष त मेरो रिसिभ जापानमा प्रशिक्षण गरेपछि सुधि्रएको हो । मलाई लैजाने सुन्जियाना म्याडमको घरमा पनि केही दिन बसें ।
खेल र अभ्याससँगै जापान बस्दाको रमाइलो के भने, खानेकुरा चपस्टिकले खानुपर्ने, आफूलाई भने चपस्टिक चलाउनै नआउने । चपस्टिक चलाउन नआएकै कारण थोरै खाएर उठ्थें । बल्ल-बल्ल अलिकति खान्थें । उनीहरु तैंले कति थोरै खान्छेस् भनेर कुरा गर्थे । आफ्नो समस्या भने आफैसँग थियो ।
अलि पछि चपस्टिकले खान पनि सिक्दै गएँ । खानेकुरा धेरै नै हुन्थे, त्यसमा पनि सुसी भन्ने मलाई असाध्यै मनपर्ने । नेपाल आएपछि पनि धेरै सम्झिरहेको त्यही सुसी नै हो । माछाको माथि अलिकति भात जस्तो राखेको हुन्थ्यो । खै त्यो कसरी बनाउने हो त थाहा भएन तर खाँदा साह्रै मीठो ।
‘सुसी खाने ?’ भनेपछि म फुरुक्क परेर ‘खानेँ खानेँ’ भनिहाल्थें । खानेकुरामा त्यस्तो मरिजाने मान्छे त होइन म .. तर सुसीमा कसरी पो मन बस्यो ।
जापानबाट मैले सिकेको अर्को कुरा अनुशासन र सम्मान हो । उनीहरु आफू असाध्यै अनुशासनमा बस्छन् र सबैलाई सम्मान गर्छन् । जापानीहरु यति राम्रो हुनुमा उनीहरुको त्यही गुणले हो भन्ने लाग्छ ।
खेलाडी नभएको भए सायद म यतिबेला घरमा यत्तिकै बसिरहेकी हुन्थें होला । आर्मी बन्ने रहर त थियो । तर बनेको भए पनि यति खुशी हुन्नथेँ होला ।
अहिले त भलिबल राष्ट्रिय खेल पनि हो । तर पनि व्यवहार राष्ट्रिय खेलको जस्तो भइरहेको छ जस्तो लाग्दैन । एसियाली खेलकुदको भलिबलमा महिला टिमलाई त लगिँदै लगिएन । त्यसले अरु साथीहरुसँगै मलाई पनि निकै दुःखी तुल्यायो ।
किन लगिएन भन्ने भित्रि कारण थाहा छैन । तर पनि देशबाहिर प्रतियोगिता खेलेर नै हाम्रो खेल सुध्रने हो जस्तो लाग्छ । आएका अवसरहरुमा सहभागी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
अर्को कुरा हामीलाई सबैभन्दा धेरै आश र जितको हौसला दिने दर्शकले नै हो । दर्शक नभएका बेला र दर्शक भएका बेला खेलमा आउने जोश नै भिन्दै हुन्छ । दर्शकले हुटिङ गरिरहँदा मलाई आˆनो क्षमता बढीरहेको महसुस हुन्छ ।
पहिलोपटक प्रतियोगिता खेल्दा मैले सर्भिस नै उठाउन नसक्दा गलल हाँस्ने दर्शक हुन् या अहिले सरस्वती … सरस्वती भनेर हुटिङ गर्ने दर्शक नै किन नहुन् सबैबाट म प्रेरणा बटुलिरहेकी हुन्छु । अगाडि बढ्ने कारण पाइरहेकी हुन्छु ।